Zayar၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
phyuthi သည်Zayarကို မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်thein wai's ၏ 'စိတ်ဓာတ်နဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရား တည်ကြည်တဲ့ ထေရိကာ ရဟန္တာထေရီမ။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်thein wai's ၏ 'အာဠ၀ကဘီလူးကမေးပြီး ဂေါတမမြတ်စွာဘုရား ဖြေကြားခဲ့သော (အာဠ၀ကသုတ္တန်)။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်တင်အေးနိုင်'s ၏ 'ဗုဒ္ဓဝါဒနှင့် သဘောထားခံယူချက်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်ရောင်ရဲ's ၏ 'မြန်မာနိုင်ငံသို့ သာသနာ ဘယ်အချိန်ကစ(1)' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်thein wai's ၏ 'ခန္ဓာရှိနေသရွေ့ ကံတွေရှိနေတယ်။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်လင်းကိုကို's ၏ 'ကိုယ့်ဘ၀ ကိုယ်ဖန်တီးနည်း.' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်မူကြိုဆရာ's ၏ 'သူတော်ကောင်းအလှူ ငါးမျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည် လှိုင်ကျော်ထွေး's၏ 'ဗုဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ် (၃) နှစ်ပြည့် (သို့မဟုတ်) သာသနာဟိတ အသင်း (၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် အလှူ'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"သာဓု သာဓု သာဓု..."
Zayar သည်မူကြိုဆရာ's ၏ '"စိတ်ညစ်ရင် အာရုံပြောင်းပါ"' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်မောင်သိန်းထိုက်'s ၏ 'သက်သတ်လွတ်စားတာ ကုသိုလ် ရပါသလား' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည် သဒ္ဓါဖြူ's၏ 'မာန (၃) မျိုး'ဘလော့ တွင်မှတ်ချက်ရေးခဲ့ပါသည်။
"မျှဝေမှုအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.သာဓု သာဓု သာဓု."
Zayar သည်သဒ္ဓါဖြူ's ၏ 'မာန (၃) မျိုး' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
Zayar သည်မောင်သုည's ၏ 'ကြည့်တက်မှမြင်-တွေးတက်မှသိ ( အပိုင်း ၂ )' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
4:42pm အချိန်သြဂုတ် 18, 2015, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
9:45pm အချိန်သြဂုတ် 18, 2014, တွင် phyuthi မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
4:30pm အချိန်ဒီဇင်ဘာ 17, 2012, တွင် သဒ္ဓါဖြူ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။